Chelsea oo la saxiixatay ciyaaryahanka Christian Pulisic | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Chelsea oo la saxiixatay ciyaaryahanka Christian Pulisic
Chelsea oo la saxiixatay ciyaaryahanka Christian Pulisic
Posted by: Mahad Mohamed January 2, 2019
Himilo FM – Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Christian Pulisic ayaa ku biiray Chelsea lakiin waxaa dib loogu celin doonaa kooxda Jarmalka inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, sida ay ku dhawaaqday kooxda Bundesliga ka dhisan.
Chelsea ayaa ka bixin doonta 58 milyan oo ginni ciyaaryahanka khadka dhexe ee United States, kaasoo seddex gool dhaliyey tartamada oo dhan illaa xilli ciyaareedkan.
20 jirkan oo u wareegay Jarmalka isagoo da ‘yar ah sannadkii 2015 islamarkaana u saftay in ka badan 80 kulan Dortmund ayaa qiray bishii November inuu rajeynayo inuu ka ciyaaro Premier League isagoo diiday inuu saxiixo qandaraas cusub.
“Marwalba waxay riyadiisa ahayd Christian in uu ka ciyaaro Premier League,” ayuu yiri agaasimaha isboortiga BVB, Michael Zorc. “Sidaas darteed ma awoodno inaan kordhino qandaraaskiisa, waxaan go’aansanay inaan aqbalno dalab aad u sarreeya oo Chelsea ah.”
Wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee taariikhda Maraykan ah iyadoo agaasimaha Chelsea Marina Granovskaia uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la saxiixday ” mid ka mid ah ciyaartoyda ugu da’da yar ee Yurub.”
Previous: Sababta uu dhiig u ilmeeyo wiil Hindiya ah oo dhaqaatiirta garan waayeen
Next: 2018: Shilal diyaaradeed oo gaaraya 15 oo dhacay
Gueye: Maxaa sababay inuu seego kulankii Montpellier FC?